Maxaa ka jira in ay Al-Shabaab oo weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin Baardheere? - Latest News Updates
Maxaa ka jira in ay Al-Shabaab oo weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin Baardheere?
Dad ku sugan Baardheere ayaa u xaqiijiyay Warbaahinta in saldhiga ay Ciidamada Itoobiya kula haayeen duleedka magaalada Baardheere ay Al-Shabaab ku qaadeen weerar culus oo ku bilaawday qaraxyo is xig xiga .
Wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay markii hore u suurta gashay in Ciidamada Itoobiya ay kala wareegaan gacan ku heynta saldhiga, intii ay ku sugnaayeen saldhigaasna ay madaafiic ku tuureen Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baardheere.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda kuna sugan magaalada Baardheere ayaa sheegay in ay kol hore ka war heleen weerarro Al-Shabaab ay qorsheynayeen in ay ku soo qaadaan magaalada Baardheere, hase yeeshee feejignaan dheer oo ay qabeen darteed ay ciidamada itobiya weerarkii saakay lagu soo qaadana ay iska difaaceen, iyagoo sheegay in khasaare badan ay dagaalka ku gaarsiiyeen Al-Shabaabki weerarka soo qaaday.
Wararkii ugu danbeeyay ee aan ka heleyno Baardheere ayaa sheegaya in dib loo celiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weerarka sooqaaday, waxaana jira khasaare soo kala gaaray labada dhinac wallow aan la xaqiiji karin inta uu la egyahay.
Gobolka Gedo Todobaadkaan Gudihiisa waa weerarkii labaad oo Al-Shabaab ay ku qaadaan Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana weerarkii kan ka horeeyay uu ka dhacay duleedka magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo,